August 2019 – Page2– Trend.com.mm
Jung Hae In ရဲ့ အကြောင်းလေးတွေပြောပြလာတဲ့ မင်းသမီး Kim Go Eun
Posted on August 29, 2019 by Noel
နာမည်ကျော်တောင်ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ မင်းသမီး Kim Go Eun နဲ့ မင်းသား Jung Hae In » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on Jung Hae In ရဲ့ အကြောင်းလေးတွေပြောပြလာတဲ့ မင်းသမီး Kim Go Eun
Scarlett Johansson ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားသစ် ”Marriage Story”
Posted on August 29, 2019 by Wint
Marriage Story ဇာတ်ကားဟာ comedy-drama အမျိုးစားဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ Noah Baumbach ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Hollywood, MoviesLeaveaComment on Scarlett Johansson ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားသစ် ”Marriage Story”
ဦးရေပြားကျန်းမာပြီး ဆံနွယ်တွေသန်စွမ်းစေဖို့ ဒီနည်းလေးတွေသာလိုအပ်
ဆံနွယ်တွေရှင်သန်ပေါက်ဖွားရာ ဦးရေပြားကျန်းမာမှသာ လှပတဲ့ဆံသားလေးတွေထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချို့တွေက ဆံသားကိုသာဂရုစိုက်ကြတယ်။ဦးရေပြားကျန်းမာရေးကိုတော့ဂရုစိုက်လေ့မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲ ဘယ်လောက်ဂရုစိုက်စိုက် ဆံပင်သားတွေမကောင်းဘူးဖြစ်နေတာပါ။ ဒီတော့ဦးရေပြားကိုဘယ်လိုဂရုစိုက်ကြမလဲ? နည်းလမ်းလေးတွေကတော့… – အုတ်ဂျုံမှုန့်နဲ့သကြားညို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, Lifestyle, NewsLeaveaComment on ဦးရေပြားကျန်းမာပြီး ဆံနွယ်တွေသန်စွမ်းစေဖို့ ဒီနည်းလေးတွေသာလိုအပ်
တစ်နေရာတည်းမှာပဲ ပိတ်မိနေတယ်လို့ ခံစားနေရရင်…
ဒီနေ့ အလုပ်ကိုသွားတယ်.. အိမ်ပြန်တယ်။ စိတ်ပါရင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မုန့်သွားစားတယ်. ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်။ နောက်တစ်နေ့လည်း ဒီလိုပဲပြန်လည်ပတ်နေတယ်။ နောက်ထပ်နေ့တွေလည်း » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on တစ်နေရာတည်းမှာပဲ ပိတ်မိနေတယ်လို့ ခံစားနေရရင်…
“Hotel Del Luna” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်လာဦးမယ့် မင်းသား Kim Soo Hyun
နာမည်ကျော်တောင်ကိုရီးယားမင်းသား Kim Soo Hyun ဟာဆိုရင် အခုလက်ရှိပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်အားပေးနေရတဲ့ “Hotel Del Luna” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on “Hotel Del Luna” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်လာဦးမယ့် မင်းသား Kim Soo Hyun
Kim Rae Won နဲ့ Gong Hyo Jin တို့ရဲ့ထွက်ရှိလာတော့မယ့် ဇာတ်ကားသစ်လေး ” The Most Ordinary Romance ”
Kim Rae Won နဲ့ Gong Hyo Jin တို့ရဲ့ဒရာမာဇာတ်ကားသစ်လေးအတွက် Trailer နဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on Kim Rae Won နဲ့ Gong Hyo Jin တို့ရဲ့ထွက်ရှိလာတော့မယ့် ဇာတ်ကားသစ်လေး ” The Most Ordinary Romance ”
အစာပြေစာအဖြစ် ပေါင်မုန့်ချိစ်အာလူးလိပ်လေး လုပ်စားကြရအောင်..
Posted on August 28, 2019 by Wint
နေ့လည်နေ့ခင်း ဗိုက်ဆာတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ပါးစပ်က အရသာရှိတဲ့မုန့်လေးတစ်ခုခုလုပ်စားချင်နေ တယ်ဆိုရင် အခုပြောပြမယ့် ပေါင်မုန့်ချိစ်အာလူးလိပ်လေးက သင့်ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုပေးနိုင်မှာပါ။ လုပ်နည်းနဲ့ ပါဝင်ပစစ္စည်းလေးတွေကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Food, LifestyleLeaveaComment on အစာပြေစာအဖြစ် ပေါင်မုန့်ချိစ်အာလူးလိပ်လေး လုပ်စားကြရအောင်..
ဦးနှောက်မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်တိုးတက်စေဖို့အတွက် အများကြီးကြိုးစားစရာမလိုပါဘူး။ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အရာကို ပုံမှန်လုပ်နေရင်းကနေပဲ ပိုပြီးဥာဏ်ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။လေ့လာချက်တွေအရတော့ သင့်ရဲ့ ဦးနှောက်ဥာဏ်ရည်ကို ပိုတိုးတက်လာစေတဲ့ဝါသနာတွေက ဒီအရာတွေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဘယ်လိုဝါသနာတွေက သင့်ကိုဥာဏ်ပိုကောင်းလာစေလဲဆိုရင်… – » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on ဒီဝါသနာတွေကိုပျိုးထောင်ပေးတာဟာ ဦးနှောက်စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေနိုင်
အကောင်းမြင်သမားနဲ့ အဆိုးမြင်သမားကြားက ကွာခြားချက်တွေ…
Posted on August 28, 2019 August 28, 2019 by Noel
အကောင်းမြင်စိတ်ထားတဲ့သူနဲ့ အဆိုးမြင်တတ်တဲ့သူဟာ ပျော်ရွှင်တဲ့သူနဲ့ မပျော်ရွှင်တဲ့သူဆိုပြီး ကွဲပြားသွားတတ်တယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဘက်ကတွေးတောတတ်သူဟာ အဆင်ပြေချောမွေ့မယ့်နည်းလမ်းကိုသာ စဉ်းစားနေမှာဖြစ်လို့ သူ့မှာစိတ်ပူပန်မှုရယ်လို့ နည်းပါးပါတယ်။အဆိုးမြင်တတ်တဲ့သူတွေကျတော့ ရှေ့ဆက်မယ့်လမ်းကိုစဉ်းစားရမယ့်အစား » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on အကောင်းမြင်သမားနဲ့ အဆိုးမြင်သမားကြားက ကွာခြားချက်တွေ…
ကွာရှင်းမယ့်အကြောင်းပြောပြီးတည်းက ပထမဆုံးအကြိမ်ပုံလေးတင်လိုက်တဲ့ Goo Hye Sun
Goo Hye Sun တို့ ကွာရှင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ Ahn Jae » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, Movies, NewsLeaveaComment on ကွာရှင်းမယ့်အကြောင်းပြောပြီးတည်းက ပထမဆုံးအကြိမ်ပုံလေးတင်လိုက်တဲ့ Goo Hye Sun